तेल, ग्यास र नवीकरणीय ईन्धनहरूको लागि अल्ट्रासोनिक्स - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
तेलको मूल्यहरू र ग्रीनहाउस ग्याँसहरू साथै ईन्धन स्रोतहरूको स्थिरताले तेलमा रूचिको फोकल बिन्दु बनायो & ग्याँस उद्योग। हेल्सेचर अल्ट्रासोनिक उपकरणहरु धेरै अनुप्रयोगहरुको लागि अनुसन्धान सुविधाहरु र प्रसंस्करण संयंत्रहरुमा प्रयोग गरिन्छ।
हेल्सेचरले बनाएको अल्ट्रासोनिक यन्त्रहरू धेरै प्रक्रियाहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ, जस्तै मिश्रण, विच्छेदन, Homogenizing र पाउडर को तरल पदार्थ मा, साथ नै को लागि भंग स्थिर पायसको उत्पादन। यो लचीलेपन ईंधनको उत्पादनमा धेरै अनुप्रयोगहरू खोल्छ। जीवाश्म र नवीकरणीय ईंधनहरूको लागि अल्ट्रासोनिक्स क्षमताको पत्ता लगाउनका लागि पढ्नुहोस्।
ईंन्धन दहनमा पानी परिचय दिइयो NO लाई कम गर्न साबित गरिएको छएक्स उत्सर्जन। पानी ईन्धनमा थपिएको पानी वाष्पीकरणको कारण दहन तापमान कम गर्दछ। जब पानी भत्काउँछ, वरिपरी ईन्टरनेसन पनि भाप हुन्छ - ईंन्धनको सतह को क्षेत्र को कम। अल्ट्रासोनिक इमुलेशनले राम्रो आकार ईंन्धन / पानी-पायस उत्पादनको लागि प्रभावकारी माध्यम हो।
अल्ट्रासोनिक प्रयोग गरेर NOx-कमी को बारेमा थप पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
हाइड्रोडेसल्फ्युलाइजेशन को एक अभिनव विकल्प अल्ट्रासोनिक रूप देखि सहायता वाला desulfurization हो। उच्च स्थानीय तापमान अल्ट्रासोनिक cavitation को परिणामस्वरूप desulfurization प्रक्रिया को रासायनिक प्रतिक्रिया केनेटिटिक्स परिवर्तन गर्दछ। यो प्रभाव वैकल्पिकको लागि अनुमति दिन्छ – कम महँगो – उत्प्रेरक या वैकल्पिक desulfurization रसायन विज्ञान को उपयोग गर्न को लागि।
Sonochemical Desulfurization को बारेमा थप पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
एरोबिक वा एअरोबिक डाइजेस्टर्समा कार्बनिक अपशिष्ट, सीवेज स्लाज, चाउचाउ र हाउभाउको प्रशोधन कार्बनिक सामग्री बायोगेसमा बदल्छ। अल्ट्रासोनिक कार्बनिक सामाग्री को विघटन पाचन भन्दा पहिले भौतिक ढाँचामा उडाउँछ, र रिलीज र एंजाइमहरू सक्रिय गर्दछ। यसले छिटो प्रसोधन, अधिक ग्याँस र कम अवशिष्ट कुंडलीको लागी कार्बनिक सामग्री को पाचन बढाउँछ। यसले बारीमा अवस्थित डाइजेस्टरहरूको क्षमता बढाउँछ र निपटान लागत घटाउँछ।
यदि तपाईं ईन्धन उत्पादन मा अल्ट्रासाउन्ड को प्रयोग को बारे मा अतिरिक्त जानकारी को अनुरोध गर्न चाहते हो त तल फारम को प्रयोग गर्नुहोस।